Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadenia oo Shir ku qabatay Edmonton.
Jaaliyada Ogadenia oo Shir ku qabatay Edmonton.
Posted by Daljir	/ May 14, 2019
Xubnaha Jaaliyada Ogadenia ee Magaalada Edmonton ayaa shir isugu yimid shalay kaasi oo ka dhacay Xafiiska Jaaliyada Ogadenia Edmonton,kana soo qayb galeen warbixin dheera la wadaageen laba masuul oo kamid ah jaaliyada Edmonton mudo dhowr bilood ah ku maqnaa Ogadenia.
Labada masuul waa.Xildhibaan Yousuf Ismail iyo Ahmed Ali Qabxun, ayaa ku dheeraatay xaalada dhabta ah ee ka jirta , Ogadenia,dhinacyada Arimaha bulshada,Siyaasada,Amaanka iyo dhaqaalaha.
Sidoo kale waxay ka warbixiyeen JWXO taniyo intay dalka dib ugu laabatay wixii u qab soomay iyo caqabadihii ka horyimid,waxayna siwada jir ah uwada qireen in shaqo badan laqabtay,mid intaas ka badana lagama maar maan tahay in loo diyaar garoobo.
Ka soo qeyb galayaasha shirka waxaa kamid ahaa Professor Mahamoud Ugaas oo isagana laga dhaqeystay Nidaamka ka jira Ethiopia qaabka uu qamaha isugala jiro iyo Cabsida ay qabaan wadamada daneeya jiriraanka Ethiopia.
Shirkan oo saacada qaatay ayaa waxaa halkaasi lagu waydiiyay mudanayaasha su’aalo ku saabsan isfan galka shacabka Ogadenia ee dalka sii joogay kuwii dib u laabtay (JWXO )iyo maamulka DDS.
Shirkan ayaa ku soo dhamaaday guul iyo in shaqada Jaaliyada Ogadenia ee wadanka Canada gaar ahaan Galbeedka siwayn loo dar dar galiyo.